Shirkadda Dahabshiil Oo Balanqaaday Inay Kaalin Mihiim Ah Ka Qaadan Doonto Horumarka Dhalinayaradda Somaliland | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Shirkadda wadaniga ah ee Dahabshiil ayaa ballanqaaday in kaalin muhiim ah ka qaadan doonto wax kasta oo lagu horumarinayo da’yarta Somaliland ee u baahan in laga qayb qaato mustaqbalkooda. Maamulaha guud ee shirkadda
Dahabshiil Mr. Cabdirashiid Maxamed Siciid oo hadal kooban ka jeediyey maanta xaflad ballaadhan oo lagu furayey tartan kubadda cagta ah oo ay ka qaybgalayaan 80 kooxood ka dhisan magaalada Hargeysa looga furay garoonka ciyaaraha ee Hargeysa Studuim, waxa uu kaga dhawaaqay in shirkadiisu diyaar u tahay inay kaalin buuxda ka qaadato barmaamujyada kala duwan ee lagu horumarinayo da’yarta dalka.
Shirkadda Dahabshiil oo iyadu maalgelisay inta badan kharashka ku baxaya tartankan, isla markaana bixisay 300 kubbadood oo kuwa cagta ah, ayaa waxa kale oo shirkaddu ballanqaaday in dib-u-habaynta Hargeysa Staduim kafaala qaadayso iyada oo lala kaashanayo Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha.
Ugu horreyn Mr. Cabdirashiid Maxamed Siciid waxa uu yidhi, “Waxaan halkan ka hambalyada Xidhiidhka Kubbadda Cagta ee i siiyey fursadan qaaliga ah ee lagu furayo tartanka kubadda cagta ee dhallinyaradu kaga qaybqaadanayso wareeggan isreebreebka ah ee kubbadda cagta.
Waxa kale oo aan hambalyeynayaa dhallinyarada tartankan ka qaybqaadanaysa ee isugu timi inay tartan caafimaad qaba ku loollamaan.”
Maamulaha guud ee Dahabshiil waxa uu tilmaamay in sida ay uga go’an tahay dhallinyarada ka qaybqaadashada tartankaasi uu muujinayo hankooda mustaqbalka, kaas oo uu ballanqaaday inay ka qaybqaadanayaan.
“Isu imaatinkiinnan baaxadda lihi waxa uu muujinayaa sida aad diyaarka ugu tihiin ka qaybqaadashada barnaamijyada horumarineed ee naftiinna, qoysaskiinna iyo ummaddiinnaba wax taraya, iyada oo ay muuqato inaad u baahan tihiin in barnaamijyo iyo mashaariic shaqo-abuuris ah la idiinku talogalo si aad uga midho dhalisaan himiladiinna, waxbarashadiinna iyo tacabka waalidkiinna si dedaalladaas wadartoodu u noqoto mid loo aayo.
Shirkadda Dahabshiil waa wax ka go’aan oo aanay Ilaahay mooyaane cid kale abaal kaga doonayn inay kaalin kasta oo ay buuxin karto ku taageerto horumarinta bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan barnaamijyada ku abbaaran da’yarteeda ee mustaqbalkooda dhisaya,” ayuu yidhi Mr. Cabdirashiid.
Waxa kale oo uu xusay in Shirkadda Dahabshiil ka qaybqaadato horumarinta ciyaaraha ee da’yarta ee meelo ay ka mid yihiin dalalka Yurub, Sucuudiga, Jabuuti, kanadda iyo New zealand.